Kooxaha Premier League oo isku khilaafsan bilaabashada horyaalka - Somgoal
Home Premier league Kooxaha Premier League oo isku khilaafsan bilaabashada horyaalka
Iyadoo la joojiyay tartanka Horyaalka England, cudurka safmarka ah ee Coronavirus dartiis, ayaa haddana waxaa soo baxaya in xilligan dhow aysan suurogal ahayn in garoomada lagu soo noqdo.
Madaxa Xiriirka Kubada Cagta ee England, Greg Clarke, ayaa yiri: “Wey adag tahay in la arko taageerayaasha kubada cagta oo garoomada lagu arko xiligan dhow.
Hadii dib loo billaabo Horyaalka Britain ee Premier League, taasi micneheedu wuxuu noqonayaa in lagu dheello garoomo aysan joogin taageerayaal.
Horyaalka England sidoo kale waxuu qorshaynayaa suurtogalnimada ah in tartanka soo socda ee 2020-ka illaa 2021, la ciyaaro iyadoo aysan jirin daawadayaal garoonka soo galaya.
Madaxa Xiriirka FA ee kubada cagta, Greg Clarke, ayaa warqad uu qoray ku sheegay: “Xaqiiq ahaan ma ogin sida xaalku noqon doono”.
Balse wuxuu intaa ku daray: “kala-fogaansha dadka ayaa wax ka badali doona daawashada sida kubada cagtu ay ahaan doonto mustaqbalka”.
Waxaa kaloo laga fikirayaa in la dhimo miisaaniyada ciyaaraha illaa $75 milyan oo gini sannadkan oo u dhiganta $93.31 Milyan oo dollar.
Waxaa jira in kooxaha waawayn ee Horyaalka Britain loo sheegay in la damacsan yahay in la isticmaalo 10 garoon oo dhexdhexaad ah si loo dhamaystiro ciyaaraha dhiman ee horyaalkan.
Kooxaha laga yaabo inay ka haraan horyaalka labaad ayaa arrinkan ka horyimid
Waxaa jira kooxo lix iyo toddobo gaaraya oo iyagana diidan in lagu ciyaaro garoomo dhexdhexaad ah, kooxaahaas ayaa sidoo kale isku khilaafsan sida loo soo afjari karo tartamada hadda hakadka ku jira ee Premier League uu ka mid yahay.
Waxaa sidoo kale jira kooxaha qatarta ugu jira inay dhaqale badan lumiyaan haddii ay horyaalka hoos uga dhacaan.
Go’aan ku saabsan in lagu ciyaaro garoomada dhexdhexaadka ah waxay sidoo kale yaraynaysaa isu-imaatinka dadka badan ee ciyaaraha usoo daawasho taga.
Kooxaha Horyaalka England ayaa ka xaajoon doona arrimahan oo kale ka dib marka dowladdu ay dib u eegto amarada bandowga bishan 7-da bishan May.
Previous articleBundesligaha jarmalka oo dib u furmaya 16 ka may.
Next articleJose Mourinho: “Ma ahayn daneyste goortii Inter Milan ku guuleysatay champions league”